संसद् नहुँदा पनि कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता, कति पाउँछन् संसद्का कर्मचारीले तलब र भत्ता ? – Online National Network
संसद् नहुँदा पनि कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता, कति पाउँछन् संसद्का कर्मचारीले तलब र भत्ता ?
९ मंसिर २०७४, शनिबार ०२:५६
काठमाडौं, ९ मंसिर – संसद् नै नहुँदा पनि यहाँ कार्यरत कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएका छन् । यसबाहेक खाना–खाजाका लागि थप दैनिक २५० रुपैयाँ सुविधा उनीहरूले पाउने गरेका छन् । राज्यकोषबाट सचिवालयका कर्मचारीको भत्तामा मात्रै मासिक ७० लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट खर्च कटौती गर्न पत्र प्राप्त भएपछि व्यवस्थापन समितिले दैनिक खाना–खाजाको खर्च घटाएर २५० पुर्‍याएको हो । तलबको ८० प्रतिशत भत्ता भने कर्मचारीले अहिले पनि पाइरहेका छन् । – नयाँ पत्रिका दैनिक